खुसी रहन हप्तामा कति पटक शारीरिक सम्पर्क ?
काठमाडौं । सम्भोग एउटा यस्तो काम हो जसले जोडीलाई एकअर्काको नजिक बनाउँछ । चाहे पति–पत्नि हुन् वा प्रेमी–प्रेमिका, सबै चाहन्छन् एकले अर्कोलाई खुसी राख्न सकौं । अब प्रश्न उठ्छ, त्यसो भए खुसी रहन हप्तामा कतिपटक सेक्स गर्नु उचित होला ?
यसको जवाफ अमेरिकामा गरिएको एउटा अध्ययनले दिएको छ । हप्तामा एक पटक गरिने शारीरिक सम्बन्ध जोडीलाई खुसी राख्न पर्याप्त छ । पछिल्लो चार दशकमा ३० हजार मानिसमा गरिएको सर्वेक्षणपछि यस्तो निष्कर्ष निकालिएको हो ।
उक्त सर्वेक्षणले धेरै यौन सम्पर्क कायम गर्दा धेरै खुसी भइन्छ भन्ने मान्यतालाई नकारेको छ । एक अध्ययनकर्ता भन्छन्, हामीले साथीसँग सम्बन्ध जोड्नु महत्वपूर्ण हुने यथार्थ थाहा पायौं । जबसम्म सम्बन्ध राम्रो छ यो जरुरी छैन कि खुसी रहन दैनिक सम्भोग जरुरी छैन ।
उनी भन्छन्, ‘साथीले बढी भन्दा बढी सम्भोग गर्ने भन्दा पनि खुसी भएको छ कि छैन त्यो ठम्याउन जरुरी छ ।’